सगरमाथालाई ‘माउन्ट सिक्दर’का नाममा नामाकरण गर्दा न्याय मिल्छ ! « Ok Janata Newsportal
सगरमाथालाई ‘माउन्ट सिक्दर’का नाममा नामाकरण गर्दा न्याय मिल्छ !
काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिएका पत्रकार सुधीर चौधरीले नेपालको शान सगरमाथालाई भारतको हो भन्ने देखाउन दाबी गर्नुपर्ने बताएको अभियान जारी रहेको जी न्यूजले जनाएको छ ।
तर नेपालमा विरोध भएपछि सो अभियानको घोषणा गरेका जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरीको ‘टोन’ मा भने परिवर्तन आएको छ ।
सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्न उस्काउने सुधीर चौधरी
बुधबार राति प्रसारित डिएनए कार्यक्रममा उनले नाम परिवर्तन गर्ने अभियानमा आफूहरु रहेको र त्यो आफ्ना गणितज्ञ राधानाथ सिक्दरलाई न्याय दिलाउनका लागि रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भए पनि अझै पनि सगरमाथा अंग्रेजको ‘गुलाम’ रहेको भन्दै आफूहरुले त्यही गुलामीको विरोध गरेको उनले दाबी गरेका छन् ।
सगरमाथा क्षेत्रमा जाँदाको भिडियो फुटेजमा माउन्ट एभ्रेस्टमा भारतको दाबी रहनु पर्ने बताएका चौधरीले बुधबार स्टूडियोबाट बोल्दा हिमालमा नभई त्यसको नाममा आफ्नो दाबी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय गणितिज्ञ राधानाथ सिक्दरले सगरमाथाको उचाइ नापेकाले उनकै नाममा सगरमाथाको नामाकरण हुनु पर्ने चौधरीले दाबी गरेका हुन् । अंग्रेजले भारतीयबाट उनीहरुको अधिकार खोसेकाले त्यही अभियान चलाएको चौधरीले दाबी गरेका छन् ।
सर जर्ज एभ्रेस्टको नाममा सगरमाथाको नामाकरण गरिएको हो । त्यसबाट राधानाथ सिक्दरमाथि अन्याय भएको र माउन्ट एभ्रेस्ट गुलाम भएकोले दाबी उनले गरेका छन् ।
‘माउन्ट एभ्रेस्ट माउन्ट सिक्दर बन्दा हिमाल भारतको हुन्छ भन्ने होइन । हिमाल त्यहिँ रहने छ । तर इतिहासमा भएको गल्ती सुधार हुन्छ ।’ चौधरीले भनेका छन्, ‘नेपाल–भारत राम–लक्ष्मण जस्तै हुन् । हामी नेपालीलाई चिढ्याउन चाहँदैनौँ । तर राधानाथ सिक्दरलाई न्याय दिलाउन चाहन्छौँ ।’